Izere overtourism site na ịgagharị ụzọ ndị ọzọ Colombia na-atụghị anya ya
Home » Njem njem » Izere overtourism site na ịgagharị ụzọ ndị ọzọ Colombia na-atụghị anya ya
As ColombiaKpakpando ndị njem na-aga n’ihu na-agbago - site na ntinye 2020 “ga-agagharị” ndepụta iji mee ka ọnụọgụ ndị njem si mba ofesi ugboro abụọ site na 2006 ruo 2018-otu a ka ọ dịkwa n'ihe ize ndụ nke ịkarị oke njem na ebe ndị kachasị ewu ewu.
'Njem njem nke abụọ' - omume nke ịgagharị n'obodo ndị a ma ama — na-arịwanye elu. Ihe kariri ọkara nke ndị njem zuru ụwa ọnụ chọrọ inye aka belata oke oriri na ịba ụba na-ahọrọ ndị a na-amachaghị, ụdị ọzọ na nhọrọ ndị ọzọ na-ewu ewu ma ọ bụrụ na ọ belata mmetụta gburugburu ebe obibi ha. Na Colombia, o siri ike ịchọta ebe dị egwu nke na-agabigabeghị.
Nke a bụ nhọrọ kachasị elu maka ebe nlegharị anya njem nlegharị anya nke 2020 nke Colombia iji hụ:
Gbanwee Caribbean Vibes maka anụ ọhịa Pacific
Ọ bụrụ na ịchọrọ na mmadụ niile na-eleta Cartagena, ị ziri ezi: obodo a echekwara nke ọma na-anabata ihe karịrị otu nde ndị ọbịa otu afọ; mkpọtụ mkpọtụ sitere na plethora obodo nke klọb abalị bụ ihe nkịtị; na coral ndị dị nso emebiwo site na mmepe osimiri na mkpofu ahihia. Maka ezumike ezumike nke osimiri nke na-atụkwasịghị na mbibi a, lekwasị anya n'ụsọ osimiri nke mba ọzọ — Pacific — nke ka dị n'etiti mpaghara ndị na-emepe emepe na Colombia. Lezie anya maka olulu mmiri nke oke uhie uhie mgbe ị na-egwu mmiri na Utría National Park ma hụ ntụpọ humpbacks n'akụkụ ụsọ oké osimiri, ndị si Antarctica bịarute n'etiti July na November iji lụọ ma mụọ ụmụ ha.
Gaa na Cristales Caño Na-adịghị Anya maka Cacao-Fueled Jungle Trek
Caño Cristales, bụ osimiri a maara dị ka "agba egwurugwu gbazee" maka ụda ya, nke nwere ọtụtụ agba, ghọrọ ihe a ma ama, ebe nlegharị anya nke Instagrammable mgbe 2016 Peace Accord na naanị otu afọ mgbe e mesịrị, amachibidoro ịbanye na mpaghara ahụ site na njem ndị ọbịa iji nye ihe mejuputara ihe ndi ozo bu ezumike. Kama itinye aha gị na ndepụta nchere ya, chọọ ahụmịhe ọzọ emere n'oge na-adịbeghị anya: oke ọhịa gburugburu Puerto Berrio na Antioquia (nke dị nso na Medellín), otu n'ime mpaghara anụ ọhịa kachasị dị na Colombia. Gaa na otu ebe a na-akọ agwa ka ị hụ etu esi akọ bekee ma ghọọ chocolate, ma mụta agbụrụ ọdịnala na mkpa agwa bekee na Colombia.
Zere ìgwè ndị Bogota iji soro ndị Pasto si oriri
Bogota nwere ike ịdị ka ọ dị jụụ na njegharị igwe kwụ otu ebe ya, ebe a na-ere nri na ugwu ugwu, mana nnabata nke ndị ọbịa mba ụwa n'afọ ndị gara aga abanyela ya na ndepụta nke "ndị mmepe ọwụwa" - obodo nwere ngalaba ndị njem na-eto ngwa ngwa karịa ngwa eji ejide elu. N'afọ a, belata nsogbu ahụ site na ịga na ebe ndị na-amaghị n'èzí: Pasto, otu n'ime obodo ndị kacha ochie na Colombia, ndị ama ama na ndị Colombia maka Carnaval de Blancos y Negros. Ememme kachasị ukwuu kwa afọ na ndịda Colombia, ememme a bụ ihe omume UNESCO Intangible Cultural Heritage. Mụta maka usoro nka na ịrụ nnukwu carrozas (ememme floats) site n'aka ndị so na ya; gaa na Las Lajas Sanctuary, chọọchị basilica e wuru n’ime ndagwurugwu nke Osimiri Guáitara; ahụmahụ ọrụ aka ọrụ na veranda agbata obi; ma nwee obi uto nke obodo dika empanadas na cuy (Guinea pig).
Olee otu America si aga: Ezumike na njem amụma 2020
Ismlọ ọrụ na-ahụ maka njem nlegharị anya na ntụrụndụ na-eme ihe ruru ijeri $ 7.72 n'ụwa niile na Q3 2019
Korea pụrụ iche nnyefe ala na India